အ ပျို တွေ လောက် မိုက် လား ဟင် – Hlataw.com
ဘေး ခန်း က စော်ကြီး ကို က သူသတိထားမိနေတာ ကြာပြီ ထိုသို့ သတိထားမိရလောက်အောင်လည်း စော်ကြီးက အိုးတောင့်လေသည် ။ ဖင်ကြီးတွေများ မှုတ်ပြီးလိုးလိုက်လို့ကတော့အို ဘာပြော ကောင်းမနည်း … သို့သော် ထိုစော်ကြီးက ယောင်္ကျား ရှိလေသည် ။ သူများသားမယားကိုဆို သူမပြစ်မှား ဒါပေသိ ရံဖန်ရံခါ ထိုအမျိုးသမီးက သူ့ကိုလိုက်လိုက်ငေးနေသည်ကတော့ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသလိုလိုသူထင်မိသည် ။
ကဲ … ဇာတ်လမ်းဖတ် တဲ့ မိတ်ဆွေတွေသိအောင် စော်ကြီး ပုံစံကိုပြောပြပါမည် ဒါမှ ဒီစာဖတ် မျက်လုံးထဲတွင်မြင်ယောင်ပြီးတဂွင်းရလည်း မနည်းဖူးမလား လို့ … စော်ကြီးက အသက် ၃၂ လောက်ဖြစ်ပုံရသည် ။ တင်ပါး တလုံးတလုံးမှာ အုန်းသီးလုံးလောက်ရှိပုံရပြီး အနောက်သို့ ကောက်ချိတ်နေလေသည် ရင်သားများကတော့ သေးငယ်ပါသည် ။ ထိုအမျိုးသမီးတွင် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးတယောက်ရှိပြီး သူ့အမျိုးသားကတော့ ပုံမှန် ခရီးထွက်နေသည်လောက်သာသိရှိထားသည် ။
သူတို့နေထိုင်သော ၆ ထပ်တိုက်တွင် ထိုအမျိုးသမီးကခေါင်းရင်းခန်းသူက ခြေရင်းခန်းအပေါ်ဆုံးလွှာတွင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည် ။ တရက် …. မစန္ဒာလို့ အမည်တွင်သော ဖင်ကောက်မ ကြီး လှေကားတွင် အထုပ်များနှင့် တိုင်ပတ်နေလေသည် ။ အထုပ်တွေက များသည် ဈေးကပြန်လာတာ သူမနိုင် ဟယ် ဟိုဘက်ခန်းက ကောင်လေး မျိုးသူပါလား …. မျိုးသူ ဒီကောင်လေးကို ကြည့်နေတာ ကြာပြီ …. မျိုးသူ အကြောင်းကို အမှန်ဆို သူမသိထားသည်မှာတော်တော်လေးကြာနှင့်ပြီမျိုးသူအရင် ရည်းစား ကြည်စင်သန့်မှာ သူမ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်လေသည် မျိုးသူက ကြည်စင်ကို အသေလိုးတာ တနေကုန် စိမ်လိုးတာ လို့ပြောသော ကြည်စင့်စကားများကိုသူမကြားယောင်မိလေသည် ။
လီးကလည်းကြီးတာဟယ် သူပြောတာ ၈လက်မနီးပါးပဲ …. ဟယ် ဟုတ်ပါ့မလားလို့ သူမ ကမေးမိတော့ တကယ်ဟဲ့ အကိတ် ဒင်းကတော်တော်လည်းထန်တယ် ငါ့ကိုလျှပ်ပေးတာများ အို အသည်းတွေပါကြွေတယ်ဟယ် …. တကယ်ဆို ကြည်စင်သန့်လို့ ငရွ မကို စွဲအောင်ဖြုတ်နိုင်သည်ဆိုထဲက မျိုးသူမှာတော်တော်လေးနှာထန်ပုံရသည် ။ ဒါကြောင့် သူမက မျိုးသူကို တွေ့ရင် သူ့လီးကြီး ကိုပြေးမြင်ယင်း ကျောပင်ချမ်းမိလေသည် ။ မျိုးသူကတော့ သိမည်မဟုတ် သို့သော် သူမက ဒီဝန်းကျင်မှာကိုယ့်အထာနှင့်ကိုယ်နေလေတော့ မျိုးသူနှင့်လည်း ခပ်တန်းတန်းပင်ဖြစ်လို့နေလေသည် ။
ဒီနေ့ တော့ သူမနှင့် မျိုးသူ တို့လှေကားတွင် အမှတ်မထင်တွေ့ကြလေပြီ သူမက အထုပ်တွေမနိုင်မနှင်းဖြင့်တက်ရသည်တာမောသည်မို့ တတိယထပ်လှေကားတွင်ခဏနားနေမိသည် ။ အရင်ရက်တွေကဆိုရင်တော့ ကလေးတို့အဖေ လွင်ကို က သယ်ပါသည် အခု လွင်ကို ခရီးသွားတာကြာပြီ လွင်ကို အကြောင်းတွေးနေတုံးမျိုးသူနှင့် ဆုံလေပြီ ….. မျိုးသူက သူ့ကိုကူသယ်ဖို့မေးချင်နေသည် ဒီကောင်လေးကသဘောတော့ကောင်းသည် ။ ပြောရင်းဖြင့် သူ့ အောက်ပိုင်းကို ငုံကြည့်ဖြစ်သည် ။
အို …. ငါဘာတွေကြည့်နေမိတာလဲ … မျိုးသူတွေ့သွားလေပြီ … မတတ်နိုင်တော့ …ထိုတိတ်ဆိတ်မှုကိုမျိုးသူမှ စတင်ဖောက်ခွဲလိုက်လေသည် ။ မျိုးသူ ( မစန္ဒာ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပုံမရဘူးထင်တယ် ကျွန်တော် ကူသယ်ပေးမယ်လေ …. ) စန္ဒာ ( အာ … ရပါတယ် မောင်လေးရဲ့ အားနာစရာ …. တွေ ) မျိုးသူ ( ရပါတယ် အစ်မ အခန်းထဲ မဝင်ပါဘူး အပြင်ကပဲ သံပန်းတံခါးနားချပေးမယ် )
စန္ဒာ ( အဲ့လို သဘောမရှိပါဘူး မောင်လေးရယ် အစ်မက … မောင်လေး ကူညီပေးတာမောနေမှာစိုးလို့ပါ …. ) မျိုးသူ ( မမော ပါဘူး အစ်မရယ် …. ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ ကျွန်တော့်အတွက် အေးဆေးပါ ) အမလေး ရှင်အေးဆေးတာကို ကျွန်မသိတယ် ရှင်က တနေကုန်တောင် ဆွဲနိုင်တာ မျိုသူ ( ဗျာ …. ) စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ရွတ်ဆိုမိသော စကားက အပြင်ဘက် သို့ ထွက်သွားလေပြီ မတတ်နိုင်တော့ ရောဖြီးရမည် စန္ဒာ ( အော် ရှင် ဆွဲ နိုင်တာ ခြင်းတွေကိုပြောပါသယ် လာ ရှင်ကျမကိုကူညီ နော် …. )အခေါ်ပြောတွေပြောင်းသွားတာကို မျိုးသူ သတိထားမိသည်
ကျမကို ကူညီလို့ပြောထဲက စန္ဒာ ( ကဲ … ရှင်လေး ဘာဆွဲမှာလဲ )မျိုးသူ ( အမကို …. )စန္ဒာ ရှက်သွားသည် မျိုးသူ ( အမ အဆင်ပြေတာဆွဲသွားလေ ကဲပါ ကျွန်တော် ဆန်ထုပ်သယ်လာမယ် အစ်မ ခြင်းတောင်ဆွဲပြီး တံခါးဖွင့်နှင့် နော် ) စန္ဒာ ရှေ့မှတက်သွားတော့ မျိုးသူခဗျာ စန္ဒာ တင်ပါးတွေကို ကြည့်မိသည် နည်းတဲ့အိုးကြီးလား ကောက်ချိတ်နေတာပဲ ဆင်ပြေနပြေ ထိုင်မှုတ်လိုက်ရကွာ …. မျိုးသူ သူ့တင်ပါးတွေကို ငေးနေတာ စန္ဒာသတိထားမိသည် နောက်သို့ မခို့တရီု့ ငေးမိတော့ အတွင်းခံကောင်လေးမဝတ်ထားဘူးထင်သည် ဘောင်းဘီကြီးမှာ ဖောင်းကြွလို့နေတာ တွေ့တော့ စပါတ်အတွင်းသားတွေပင် ယားကျိကျိဖြစ်လာလေသည် ။
ဒီလိုနှင့် စန္ဒာ အိမ်အတွင်းနောက်ဖေးထိ ရောက်လာသည်မျိုးသူ ဆန်ထုတ်ကိုချသည် အရှိန် နှင့်ပင် စန္ဒာ တင်ပါးကို ငယ်ပါနှင့်သွားတိုက်မိသည် အမလေး အကြီးကြီးပဲလန့်တာ ဟယ် နှုတ်မှလည်း ရုတ်တရက် ထွက်မိသွားသေးသည် မျိုးသူ စလေပြီ ….မျိုးသူ ( ဘာကြီးတာလဲ အစ်မရဲ့ ) စန္ဒာ ( အော် မင်း …. ပေါင်လုံးကြီးတွေပြောတာပါ တိုက်မိတော့လေ …. ) မျိုးသူ ( အစ်မ တင်ပါးတွေကြီးတာကိုမမှီပေါင်ဗျာ ….
မျိုးသူ စသွင်းနေပြီ စော်ကြီးဖင်က ကောက်နေတာပဲ ခုနက ဖင်ကိုလျှာဖြင့်နုးထားသဖြင့် လီးထိပ်လေးတော့ နည်းနည်းကျပ်သော်လည်း ဝင်လို့သွားသည် ။ အား …. အား မောင်လေး ဖြေးဖြေး နော် သူမ ကြောက်ရွံ့နေပေမယ့် ဒီလီးကြီး နှင့် ဖင်ခံလိုက်ချင်သည့် စိတ်က ထိန်းမရ …. ကဲ မထူးတော့ပါဘူး မောင်လေး ခဏ …. သူမ ယောင်္ကျား လီးသေးသေးလေး ကြီးလာအောင် လိမ်းသောမုန့်ညင်းဆီ ကိုသူမပြေးယူသည် ။ထို့နောက် မောင်လေး အမဖင်ထဲ ဆီလောင်းထည့်ပြီးမှေးလိုးနော် …မုန့်ညှင်းဆီက ပြသနာမရှိဘူး ။
စော်ကြီး အပြတ်ထန်နေပြီ မျိုးသူမုန့်ညှင်းဆီလေးထည့်လိုက်လီးသွင်းလိုက်ဖြင့် အသားကုန်ကောင်းနေလိုက်တာ လီးတဆုံးပင်ဝင်သွားလြေပြီ အချိန်ကလည်း ၃ နာရီကျော်တောင်ကြာပြီ နားလိုက်လိုးလိုက်ဖြင့်မျိုးသူ အဆောင့်ကောင်းလို့ သူမပင် ဖင်များအီဆိမ့်အောင်ကောင်းလေတော့သည် ကောင်လေးတော်တော်လေးလုိးနိုင်တယ် ရှယ်ပဲ အား …. မျိုး အသေလိုးကွာ ဖင်လိုးရတာကောင်းလား …. ရှယ်ပဲ မရယ် မအပေါ်ကတက်နော် … တွေ့မယ် ဒင်းလေး အပေါ်က တက်ပြီး မြင်းစီးနေလိုက်တာ အချက်ပေါင်း၃၀ မရောက်ခင်မှာပင် တချီပြီရပြန်လေသည် ။
ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် …. မောင်လေး အမလေး ကောင်လေးက အပေါ်မှသူ့ကိုတွန်းလှဲပြီး အသားကုန် ဆောင့်ပြန်သည် အမလေး မောင်လေးရေ .. မဖင်ကြီးကို ကြိုက်လား … ကြိုက်တယ် အရမ်းကြိုက်တယ် ဖင်ကောက်မကြီး အချက်ပေါင်း ၄၀ လောက်မှာတော့ဖင်ကောက်မကြီး ပါးစပ်ဟ သူမပါးစပ်ဟတော့ သူမဖင်မှဖြုတ်လာသော လီးကြီးထံမှ သုတ်များ အဆက်မပြတ်ထွက်လာလေသည် ဟဲ့ကောင်လေးက သူ့နှုတ်ခေါင်းကိုပိတ် ၊ သူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားလိုက်သောက်ချလိုက် မ …. လရည်တွေ မလေး လရည်တွေက ချိုလိုက်တာ ….မောင်လေး မ က မင်းလိုးနေတဲ့ အပျိုတွေလောက်မိုက်ရဲ့လားဟင် ….လို့သူမကမေးတော့ …မရယ် မ… ကိုပဲ လိုးတော့မယ်ဗျာ … ပြီးပါပြီ